Zimbabwe: 'Incorporate Youths in Zanu-PF Structures' - allAfrica.com
This was said by the ruling party's national chairperson Cde Oppah Muchinguri-Kashiri while addressing the Mashonaland East Provincial Coordinating Committee (PCC) in Marondera on Saturday.
Cde Muchinguri-Kashiri said youths were the party's future and if given the opportunity to lead, they would spearhead Zanu PF programmes.
"We want a leadership which is knowledgeable, highly disciplined and which respects the aspirations of our people in rural areas and people who are able to articulate our expectations as Zanu PF," said Cde Muchinguri-Kashiri.
Top Headlines Governance Children Zimbabwe
Speaking at a PCC meeting, the Secretary for Administration in the Women's League Cde Monica Mutsvangwa said the party needed leaders who were going to advance President Mnangagwa's vision of developing the country.
The party's secretary for security Cde Lovemore Matuke reiterated the importance of unity in Zanu PF. Addressing a Mashonaland West PCC meeting in Chinhoyi on Saturday, the Secretary for Transport and Welfare Cde July Moyo said the party was going to align the newly revived structures with the party's constitution.